दिदीले यसरी खोलिन् अाफु हिंसामा परेको पीडा..
कुरा केही दिन अघिको मात्रै हो । मेरो यात्रा काठमाडौँबाट चरिकोटसम्मको थिए । मैले यात्रा गरेको बसको सिटमा धेरै पुरुष थिए । त्यही बीचमा म एक जना दिदीसँगैको सिटमा परेछु । चिनजान गर्ने क्रममा उहाँ दोलखा कै हुनुहुँदो रहेछ ।
दिदीले मलाई आफ्नो बारेमा सबै जानकारी गरे, तर मैले भने थोरै भने । यसरी कुरा गर्दै जाँदा दिदीले मलाई बीच बाटोमा आएपछि तपाई एक्लै बसमा काठमाण्डौँदेखि आउनु भएको भन्नुभयो । मैले किन दिदी ? बसमा पनि साथी चाहिन्छ र ? भनेर सोधेको मात्रै के थिए । उहाँले आँखाभरी आँशु पार्दै भने- हामी महिला कहाँ सार्वजनिक स्थलमा ढुक्क भएर हिड्न सक्छौ त । मलाई बसमा हिड्न पनि किन साथी चाहियाे भन्नेमा खुल्दुली लाग्याे र थप जान्ने ईच्छा भयो । मैले थप कुराकानी गर्ने कोशिष गरे ।
उहाँले यसरी पोखिन् अाफ्नो बेलीविस्तारः
अहिले हरेक व्यक्ति, संघसंस्था सरकारी निकाय सबैको एउटै साझा उद्देश्य छ, महिला हिंसा न्युनीकरण गर्ने । तर खै न्युनिकरण ? यो प्रश्न कतिञ्जेलसम्म ठाड्याउने ?
मैले पनि धेरै पटक यसरी एक्लै हिड्ने कोसिस गरे र गर्दै पनि छु । कहिले तपाई यहाँ बस्नु भन्ने बहाना त कहिले दिदि म पनि तपाईको सिटमा बस्छु भन्ने बहानामा हिंसात्मक गतिविध भोग्न बाध्य भईरहेको छु र भोगी रहेको छु । बसमा यात्रा गर्दा मात्रै हैन, घर बाहिर निस्कदा पनि महिला भएको डर बोकेर निस्कनुपर्छ । पहिला मेरी आमाले पनि यस्तै हिंसा भोगी रहनु भएको थियो । आज आमाले भोगेको हिँसाको ३५ वर्षपछि म पनि भोग्न बाध्य छु । होला मेरी आमाले घर छरछिमेकी अर्काको श्रीमानको मात्रै हिँसा भोग्यो होला । तर अहिले मैले अफिस, घर, विद्यायय, पसल होटलमा पनि हिंसाको शिकारमा परेको छु । जसरी यो समाजमा पुरुष सार्वजनिक स्थलमा जाँदा पुरुषाेत्व भएको घमण्ड लिएर निस्कन्छन । हामी महिला, महिला भएको डर बोकेर निस्कनुपर्छ । फरक यही छ । पुरुषहरु गर्वकासाथ अरुलाई सुरक्षा दिन सक्छु भने घमाण्ड गर्छन् तर हामीले त्यही पुरुषबाट हिंसा गरिरहेका हुन्छन्। हामी हिंसाबाट पिडित हुँदा शिक्षित वर्गको साहारा खोज्छौं । अनि त्यही शिक्षित पुरुषबाट थप हिंसाको शिकार बन्नुपर्छ । यस्तै छन् सारा समाज । भन्दै दिदी रुनु भयो ।
वास्तवमा हामीले यस्ता धेरै हिंसा भोगिरहेका छौं । दिदी त केवल प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । दिदिसँग मैले करिब ५ घण्टासँगै यात्रा गरे । त्यो यात्रा भरी मलाई दिदीले सार्वजनिक स्थलमा आफु हिड्दा भोगेको हिंसाको पिडा मात्रै सुनाएन, आफुले काठमाण्डौँमा जागिर खाँदा भोगेको पिडा पनि सुनाइन् ।
दिदिले भोगेको संसार भन्दा फरक छैन मेरो आमा र आम नेपाली महिलाले भोगेको संसार भन्ने मलाई पनि लाग्यो । होला हामी कसैले धेरै त कसैले थोरै हिंसा भौगेका छौं यो समाजमा । चाहे सरकारी अफिसमा होस या सामुदायिक संघसंस्था, होटल, पसल, घर या सवारीसाधान र विद्यालय जतातातै हामी हिंसामा परिरहेकै हुन्छन् । पहिला महिलाहरुले घरमा हिंसा भोग्न बाध्य थिए, तर आज महिलाले हरेक सार्वजनिक स्थल निस्कँदा महिला भएको डर बोकेर निस्कन बाध्य भएका छन् र छौं ।
नेपालमा महिला अधिकारका कुरा गर्नेको संख्या हेर्ने हो भने थुप्रै भेटिन्छन् । कुरा मात्रै हैन नेपालको संविधान २०७२ महिलाको अधिकारका कुरा मौलिक हकमा नै राखिएको छ । बलात्कार तथा महिला हिंसाको उजुरी लिन प्रहरीको महिला सेल, महिला आयोग वा स्थानीय निकायमा पनि उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी अहिले हरेक व्यक्ति, संघसंस्था सरकारी निकाय सबैको एउटै साझा उद्देश्य छ, महिला हिंसा न्युनीकरण गर्ने । तर खै न्युनिकरण ? यो प्रश्न कतिञ्जेलसम्म ठाड्याउने ?
नेपालमा कति महिलाहरुले हिँसा न्युनीकरणका भएको महशुस गर्न पाएको होला ? त्यो पनि कसैले महसुस गर्न पाएका छैन । नेपालमा महिला हिंसा न्युनीकरणको लागि सरकारले बजेट छुट्याएर, सुचनामार्फत प्रचारप्रसार गरेपनि अझै न्युनिकरण भएको छैन । बरू दिनानुनदिन बलात्कार, हिंसाका समाचार अइरहेकै छन् । महिलाहरूले हिजो पनि हिंसा भोगी रहेका थिए, आज पनि भोगी रहेकै छन् । फरक भोगाई मात्रै हो।
तारादेवी बस्नेत | संचारकर्मी हुन् |
तारादेवी बस्नेत बाट थप
काँग्रेसबाट निर्वाचित वडा सदस्य शेर्पाको निधन
गाउँपालिकाले ३४ वटा योजनाको संशोधन
शैलुङमा आधुनिक कृषि औजार
कहाँ हराए शाखा अधिकृत ? ३ महिनादेखि पत्तो छैन
भुकम्पपिडित भन्छन् : प्राविधिक नहुँदा समस्या